दोलखा विगुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्कृष्ट पालिकाका रुपमा विकास गरिनेछ : अच्युतम कटुवाल
दोलखाको विगु गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण छ । जिल्लाका नौओटा पालिकामध्ये प्राकृतिक स्रोतमा धनी मानिने विगु गाउँपालिकामा देशकै बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना(४५६ मेगावाट) सञ्चालित छ । स्थानीय निर्वाचनको एजेण्डा र समृद्ध विगु निर्माणको योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर विगु गाउँपालिका अध्यक्ष पदको उम्मेदवार अच्युतम केसी कटुवालसँग गरिएको संवादः
० स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले तपाईंलाई विगुु गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा अगाडि सारेको छ,तपाईंका चुनावी एजेण्डाहरु केके छन्?
प्रश्नका लागि धन्यवाद ।सर्वप्रथम पार्टीले विश्वासका साथ उम्मेदवार बनाएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । चुनावी अभियानमा जोडिनुभएका अग्रज नेताहरु, विगुका समस्त नेता–कार्यकर्ताहरु, आम विगुवासीको जनचाहना र सुझावलाई आधार मानेर मैले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धतापत्र अगाडि सारेको छु । गाउँपालिकाको आठओटै वडाको समग्र विकास निर्माणदेखि लिएर विगुलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ ? जनतालाई कसरी खुसी सुखी राख्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन मनन गर्दै मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको छु । त्यस सन्दर्भमा मेरा आफ्ना योजना र सपनाहरु छन् । निर्वाचित भइसकेपछि सिन्धुपाल्चोकको सिमानामा पर्ने ठिङसाङलादेखि लप्चीसम्मको पर्या पर्यावरण सडकमार्ग बनाउनेछु । त्यस्तै, विगु गुम्बालाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रुपमा बुद्ध दर्शन अध्ययन केन्द्रमारुपान्तरण गर्नेछु ।
विगुदेखि देउढुंगा तोर्पेसम्म सडक मार्ग निर्माण गर्ने, त्यहाँ केवुल कार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सञ्चालनका लागि पहल अगाडि बढाउनेछु ।थामी, तामाङ, शेर्पा जातीहरुको भाषिक, सांस्कृतिक अध्ययनका लागि संग्रहालय स्थापना गर्नेछु । कक्षा ३ सम्म सकभर मातृभाषामा अध्यापन गराउने पहल लिनेछु ।
त्यस्तै, थामी समूदायको आम्दानीको स्रोतसँग जोडिएको आलम्पुको ढुंगा खानीलाई आधुनिक व्यबस्थित उद्योगका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छु । मगर भाषा उत्थानको प्रयास गर्नेछु । चिलंखाको बुलुक्पामा रहेको चेन्चुङ मेन्दुङ गुम्बा र १२ सय पल्टन रहेको स्थललाई ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्ने मेरो लक्ष्य रहेको छ ।
लादुकस्थित बुलुङ्सी चउरमा रहेको पोखरीलाई हिउँद याममासमेत पानीको आपूर्ति गराई तालका रुपमा विकास गर्ने, त्यहाँको पानीलाई सिंचाईका लागि उपयोग गर्ने कोशिस गरिनेछ । पोखरीको शिरमा रहेको कालिञ्चोक भगवतीको मन्दिरलाई धार्मिक पयर्टकीय स्थलका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइनेछ ।
वराङको शिरमा रहेको थोपो डाँडालाई थोपोगढीका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छु । वुलुङको सुनखानीस्थित गोल्मा राजाको बासस्थानलाई पयर्टकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छु । वराङमा रहेको ठाडो खोला मन्दिरलाई व्यबस्थित रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छु ।
विगु गाउँपालिकाभित्रका सबै सडक कालोपत्रे गरिनेछ । सडक क्षेत्रका खोलाहरुमा पुल निर्माण गरिनेछ ।चर्चित लप्ची गुम्बालाई धार्मिक पयर्टकीय स्थलका रुपमा विकास गरिनेछ ।
गम्भीर प्रकृतिको सुत्केरी व्यथा लागेका महिलाहरुलाई सबै वडाहरुमा हेलि एम्बुलेन्सको व्यबस्था गरिनेछ ।
विगुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्कृष्ट पालिकाका रुपमा विकास गरिनेछ । प्रत्येक वडामा विपन्न बेरोजगार युवाको छनोट गरी आत्मनिर्भर बनाउन आधारभूतदेखि डिप्लोमासम्मको विभिन्न प्रकारका प्राविधिक सीप सिकाइनेछ ।
तामाकोशी नदीमा ¥याफ्टिङ सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । सबै स्थानीय बासिन्दालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू गरिनेछ । सबै स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक दरबन्दीको व्यबस्था र स्तरोन्नतिको प्रयास गरिनेछ ।
युवाहरुको शारीरिक–मानसिक विकासका लागि पालिकास्तरीय खेलकुद सञ्चालन, स्थानीय युवा क्लवहरुको प्रबद्र्धन गरिनेछ । विद्यालयमा आधारभूत तहबाटै अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापनको प्रबन्ध मिलाईनेछ । प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई ल्यापटपको व्यबस्था गरिनेछ ।
घातक रोगको उपचारमा अनुदानको व्यबस्था गरिनेछ । गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यबस्था मिलाइनेछ । दीर्घरोगीहरुलाई निःशुल्क औषधीको प्रबन्ध, वृद्ध बुबा आमालाई घरदैलो स्वास्थ्य परीक्षणमार्फत निःशुल्क औषधी दिइनेछ ।
चुनाव जितेको एक महिनामै हुलाकी स्वास्थ्य सेवा व्यबस्था गरिनेछ ।गरिब विपन्न परिवारका ७० वर्ष उमेर पुगिसकेका वृद्धवृद्धालाई स्थानीय सरकारका तर्फबाट थप एक हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
नदी छेउका बस्तीहरुमा तटबन्ध निर्माण गरी सुरक्षित वस्तीका रुपमा विकास गरिनेछ । सिंगटी बजारका घर र जग्गाहरुको कानुनी जटिलताको समाधान गरिनेछ ।
सबै बेरोजगार युवाले रोजगारी प्राप्त नगरेको अबस्थामा उनीहरुलाई बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । विदेशमा जान चाहने युवालाई आवश्यक तालिम उपलब्ध गराइनेछ । स्वदेश फर्किएका युवालाई व्यबसायमा संलग्न गराउन यथेष्ट अनुदानको व्यबस्था गरिनेछ ।
बाँझो जमिनको आँकडा लिई आधुनिक खेती प्रणालीको विकास गरिनेछ । कृषकका लागि बाली बीमाको व्यबस्था गरिनेछ । पशुपालकलाई उचित अनुदान र बीको व्यबस्था गरिनेछ ।
विगु गाउँपालिकाबाट छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको आधा खर्च व्यहोरिनेछ ।
मेरा योजनाहरु विस्तृत रुपमा प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छन् । ०५४ सालमै स्थानीय निकायलाई घरदैलो सरकारका रुपमा विकास गराउन स्थानीय स्वशासन ऐनमार्फत एमालेले लिएको पहल, राज्यका सबै निकायमा एमालेको अगुवाईमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने कानुन निर्माण, लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा साकार पार्न मासिक चारहजार रुपैयाँसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने काम, संघीयता कार्यान्वयनका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका काम, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनका लागि पार्टीले गरेका काम, नेपाललाई नयाँ यूगमा प्रवेश गराउनेगरी हाम्रो नेतृत्वको सरकारले गरेका दर्जनौं यूगान्तकारी कामलगायतका तमाम विषयहरु नै मेरा चुनावी एजेण्डा हुनेछन् ।मलाई लाग्छ, हाम्रा यी एजेण्डासामू अप्राकृतिक गन्तव्यहीन गठबन्धनका उम्मेदवाहरुका कुराफिक्का सावित हुनेछन् ।
० विगु गाउँपालिकामा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको स्थानीय सरकारले आठओटै वडामा समानुपातिक र समावेशी विकास गर्न सकेन, भौतिक पूर्वाधार विकास अगाडि बढाएन, पाँच वर्षसम्म गाउँपालिकाको भवनसमेत बनाउन सकेन भन्ने जस्ता थुप्रै जनगुनासा मात्रै सुनिन्छ । तर तपाईंले विजय हासिल गर्नुभयो भने ती सबै जनगुनासालाई कसरी सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
निश्चय पनि ०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकामा राम्रो काम गर्न नसकेको जताततै गुनासोहरु सुनिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिंचाई, सेवा प्रवाहलगायत सबै क्षेत्रमा समस्या र जनगुनासोहरु आएका छन् । ती सबै जनगुनासो सम्बोधन गर्नेगरी विगुलाई दोलखाका नौओटा पालिकाहरुमध्ये उत्कृष्ट नमूना पालिकाका रुपमा विकास गर्ने अठोटसहित मैले नेकपा एमालेबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको छु । समग्र विगुको समृद्धिका लागि अहिलेको गठबन्धन सरकारले केही गर्न सकेको छैन, गरेको पनि छैन । त्यसकारण विगुका सबै वडाका जनताले अब एमाले मात्रै यहाँको नेतृत्व गर्न सक्षम छ, यस पटक अघिल्लो पटकको कमजोरी सच्याइनेछ भनेर हामीलाई उत्साही गराइरहनुभएको छ । चुनावी कार्यक्रममा साथ दिइरहनुभएको छ ।एमालेको पक्षमाजनताको यस्तो लहर देखेरै उहाँहरुले फेरि पनि सिङ र पुच्छरको, थरीथरी रंग मिलाइएको गठबन्धन बनाउनुभएको छ । तर, एक कार्यकालको काम देखेरै आजित बनिसक्नुभएका सचेत विगुवासी जनसमूदायले यस पटक जनभावानालाई खेलवाड गर्ने, यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन दुरुपयोग गर्न पल्किसकेकाहरुलाई धुलो चटाउनेगरी पराजित गरेर एमालेलाई विजय बनाउनुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
० विगु गाउँपालिका दोलखाको दुर्गम पालिकाभित्र पर्छ, चीनसँग सिमाना जोडिएको छ, मानव विकास सूचांकमा पनि पछाडि नै छ । अर्कोतिर प्राकृतिक स्रोत र पयर्टकीय दृष्टिले विगु दोलखा जिल्लाको मात्रै नभएर वागमती प्रदेशकै धनी स्थानीय तहका रुपमा परिचित छ । यस पृष्ठभूमिमा सबै राजनीतिक दलले विगुको विजयलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको चर्चा चल्ने गर्छ । नेकपा एमालेले चाहीँ त्यस्तै प्रतिष्ठाको विषय बनाएर के कस्ता चुनाव जित्ने योजना र रणनीति बनाएको छ ?
नेकपा एमालेकै पहलमा विगुमा देशकै रोल मोडलका रुपमा स्वदेशी लगानीमा राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सुरु भएको हो । स्वदेशी लगानीका लागि स्रोत जुटाउनेदेखि सम्पन्न गर्ने कामसम्म एमालेको अतुलनीय योगदान छ भन्ने विषय यहाँका जनताले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । तर, यहाँका सबै वडाका जनतालाई आयोजनाको सेयर समानुपातिक ढंगले वितरण गराउन निर्वाचित जनप्रतिनिधि असफल हुनुभयो ।यद्यपि, हामीले सबै वडामा समानुपातिक सेयर वितरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज गाउँगाउँमा उठायौं, काठमाडौंमा बस्ने विगुवासीले संगठित अभियान नै संचालन गर्नुभयो । यसरी जनताको आवाजलाई हामीले नेतृत्व गरिरहँदा पनि पालिका सरकारको नेतृत्वका रुपमा उहाँहरुले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनासँग समन्वय गर्न सक्नुभएन ।
यति हुँदाहुँदैनेकपा एमालेको दबाबकै कारण सबै वडाहरुमा समानुपातिक ढंगले सामाजिक उत्तरदायित्वको बजेट खर्च गर्ने विषय सम्बोधन भएको यहाँका जनतालाई अवगत नै छ ।
यी सबै विगतका कुराहरुबाट शिक्षा लिँदै नेकपा एमालेले अबको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेर पालिका सरकारको नेतृत्व गरेपछि पालिकाभित्र बन्ने सबै जलविद्युत आयोजनमा कम्तीमा दश प्रतिशतभन्दा माथि समानुपातिक सेयर वितरणको व्यबस्था मिलाइनेछ । जनचाहनाअनुसार काम गर्नेछौं ।
त्यसकारण हामीले कुनै प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छैनांै । धेरै जनगुनासा सुनिएकाले एकपटक नेतृत्वमा असफल भइसकेका व्यक्तिहरु नै अगाडि बढ्न खोज्दा उहाँहरुमा स्वाभाविक रुपमा अब पराजित हुने हो कि भन्ने भय र छटपटाहट हुनसक्छ । तरविगुमा नेकपा एमालेको बलियो संगठन छ, जनआधार छ, त्यसैले विजय बन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
जनताले विगतका प्राविधिक कमजोरी सच्याएर यस पटक एमालेलाई मतदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहनुभएको छ, हामी उहाँहरुको प्रतिक्रिया सुनेर उत्साहका साथ अगाडि बढिरहेका छौं ।
० कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनसँग चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, चुनाव जित्ने आधारहरु केके छन् ?
यस पटकको निर्वाचनमा विगु गाउँपालिकामा नेकपा एमालेले चुनाव जित्ने आधारहरु धेरै छन् । कतिपय कुरा, अघिल्ला प्रसंगहरुमा पनि उल्लेख गरिसकेको छु ।
गठबन्धनमा अध्यक्ष माओवादी केन्द्र र उपाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको छ । तर, पालिकामा नेतृत्व गरिरहँदा उहाँहरुले पाँच वर्षमा केके काम गर्नुभयो ? जनताले उत्तर खोजिरहँदा उहाँहरुले कतै पनि जवाफ दिन सक्नुभएको छैन । हुँदै नभएका झुटका पुलिन्दाको प्रचार गर्दै भोट मागिरहनुभएको छ ।
गाउँपालिकाको बजेट दुरुपयोग गर्दै जनता अपमानित हुनेगरी सबैतिर मत किन्ने कोशिस गरिरहेका खबरहरु जनताले नै बाहिर ल्याइरहेका छन् ।उहाँहरुले आफ्ना असफलताहरु ढाकछोप गर्न अनेक प्रयास गर्दा पनि सक्नुभएको छैन ।
सिंगटीबाट लामाबगरबाहेक सबैतिरका ग्रामीण सडक पाँच वर्षसम्म कालोपत्रे नहुँदा वर्षायाम सुरु हुनेबितिक्कै तीन÷चार महिना बन्द हुने कष्टकर नियती जनताले भोगिरहनुभएको छ । सबैतिर जनताले सार्बजनिक सुनुवाई प्रभावकारी रुपमा नगरिएको, गाउँपालिकाको विकास खर्च, सेवा प्रवाह सार्बजनिक नगरी बजेट दुरुपयोग गरेको, ती सबै विषय थाहा पाउने सूचना प्राप्त गर्ने जनताको संवैधानिक हक खोसिएको गुनासाहरु पोखिरहनुभएको छ ।
उहाँहरुले गरेका तमामअनियमितताबारे प्रश्नहरुउठिरहेका छन् । पाँच वर्षे कार्यकालमा उहाँहरुले एउटा पालिका भवनसमेत निर्माण गर्न सक्नुभएको छैन ।त्यसकारण स्वतस्र्फूत रुपमा जनताले मेरो उम्मेदवारीप्रति समर्थन जनाउनुभएको छ । नेकपा एमालेको चुनावी एजेण्डा, समृद्ध पालिका निर्माणका लागि मैले प्रस्तुत गरेका योजनाहरुरुचाउनुभएको छ । आम जनता, कार्यकर्तापंक्तिको मात्र होइन, गठबन्धनभित्रैका थुप्रै नेता–कार्यकर्ताले मेरोउम्मेदवारीलाई समर्थनगरिरहनुभएको छ ।
पाँच वर्षभित्र उहाँहरुले के काम गर्नुभयो ? जथाभावी सडक खनेर धुलाम्मे बनाउने, आसेपासेहरुलाई काम दिन अवैज्ञानिक ढंगले जताततै डोजर लगाएर पर्यावरणीय विनास गर्ने, जनताले धुलाम्मे सागसब्जी खानुपर्ने, बस्तुभाउले घाँस पानी खान नपाउने अबस्था मात्रै सिर्जना गर्नुभयो ।
खानेपानीको समस्या उस्तै छ, कहाँ केकति सडक स्तरोन्नति गर्नुभयो ?, शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने काम केके गर्नुभयो ? कति बेरोजगार युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुभयो ?
सडकहरु धुलाम्मे छन्, कालोपत्रे कतै भएका छैनन्, पुल निर्माणका काम सबैतिर अलपत्र छन् । सार्बजनिक जग्गामा भवन निर्माण गरेका जस्ता विषयमा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरु नै मुछिएका विषयहरु बहिर आएका छन् ।
गाउँपालिका कहाँ चलाइयो भन्ने पनि जनतालाई थाहा छैन । सिंगटीमा भाडामा लिएको घरमा एउटा कोसेली घरमा पाँच वर्षसम्म गाउँपालिकाको कार्यलय चलाइएको अबस्था छ ।योभन्दा लज्जास्पद स्थिति अरु के हुन्छ ? यस्ता तमाम प्रश्नमा जनताले जवाफ मागिरहनुभएको छ । पालिकाको कार्यालय रहने मुकामसम्म सडक अनिवार्य कालोपत्रे गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिलाईसमेत लत्याएर पाँच वर्षसम्म उहाँहरुले कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । गाउँपालिकामा केन्द्र र प्रदेशको बजेटलाई खर्च त गर्नुभयो, तर कसरी उपयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा जनताले हेक्का राखेका छन् । आफन्त पोसिएका छन् ।
समग्र विकासको खाका कोर्न सक्नुभएन । जनताले उहाँहरुलाई विकास बिरोधी भनिरहनुभएको छ । त्यसकारण उहाँहरुको पाँच वर्षे असफलता र एमालेले अगाडि सारेका प्रतिबद्धतापत्र नै मेरो जितका आधारहरु हुन् । @nawayug
संक्रमण जोखिम बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह